သည်​နေ့​တင်​လိုက်​တဲ့​နည်း​ပ​ညာ​လေး​က​တော့ ​ဘ​လော့​ရဲ့ ​ဆိုဒ်​ဘား​ဘေး​က​နေ slider ​ပုံ​စံ
​လေး​နဲ့ ​ထွက်​လာ​မဲ့ ​နည်း​လေး​ပါ...​သူ​က​တော့ ​မိ​မိ​တို့ ​ညွှန်း​လို​တဲ့ ​ဘ​လော့​တွေ​ကို ​ထည့်​ထား​နိုင်​ပါ​တယ်... ​နောက် ​တ​ခြား​မည်​သည့်​လင့်​တွေ ​နေ​ရာ​တွေ​မ​ဆို ​အဲ​ထဲ​မှာ ​ထည့်​ပြီး ​လမ်း​ပြ​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်...​နော် ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ...
Step 1. ​အ​နေ​နဲ့ ​အောက်​က​ပုံ​လေး​တွေ​အ​တိုင်း​ပေါ့ ​သွား​လိုက်​ပါ...
( ​မ​ရှင်း​ပါ​က ​ပုံ​လေး​တွေ ​ကြည့်​လုပ်​ပါ )
Step 2. ​အ​ပေါ်​ပုံ​မှာ​မြင်​နေ​တဲ့ ​နေ​ရာ​ရောက်​တာ​နဲ့ AddaGadget ​ဆို​တာ​ကို​က​လစ်​ပေး​လိုက်​ပါ။
Step 3. ​နောက်​တ​ဆင့်​အေ​န​နဲ့ ​အ​ပေါ်​က​လို ​ဇ​ယား​လေး​ကျ​လာ​တာ​နဲ့ ​အ​ပေါ်​ပုံ​ပြ​ထား​တဲ့ ​အ​တိုင်း
Step 4. ​အဲ​ချိန်​မှာ ​ဘောက်​လေး​တစ်​ခု ​ကျ​လာ​မယ်.. ​အဲ​ထဲ​မှာ​ဘဲ ​အောက်​က ​ကုဒ်​တွေ​ကို ​ကော်​ပီ​ယူ ​ထည့်
​မှတ်​ချက် ။ ။
​သည်​လင့်​တွေ​မှာ ​မိ​မိ​တို့​လို​ခြင်​တာ ​ညွှန်း​ခြင်​တာ​ကို ​ထည့်​ပေး​ရ​ပါ​မယ်....​ဥ​ပ​မာ
​သည်​လို​လေး​ပေါ့... # ​နေ​ရာ​မှာ ​မိ​မိ​ရဲ့ ​ညွှန်း​လို​တဲ့ ​လင့်​ပေါ့​ဗျာ.. ​နောက်​က​တော့ ​ညွှန်း​တဲ့ ​ဆိုဒ် ​အ​မည်..
​ဆိုဒ်​ကို​မှ ​မ​ဟုတ်​ဘူး​နော် ​ဘယ်​နေ​ရာ​ကို​မ​ဆို ​ညွှန်​ပြ​နိုင်​ပါ​တယ်... ​လို​အပ်​ပါ​က ​လင့်​တွေ​ကို ​ထပ်​ပြီး ​ပွား​နိုင်​ပါ​သေး​တယ်​နော်.... ​အဲ​တိုင်း​ကော်​ပီ​ယူ ​အောက်​က​နေ ​လို​သ​လို​ပွား​စေ​ဗျာ......
<<<​မန်​ဘာ​ဝင်​ပြီး...Fb Like ​ခြင်း​ဖြင့် ​အား​ပေး​ကြ​ပါ​နော်>>>
​အောင်​အောင်(​မ​က​စ) ​ပိုင်​ဆိုင်​သော ​နေ​ရာ​လေး​များ​ကို​လာ​လည်​ကြ​ပါ။